नेपाल पत्रकार महासंघको मतगणना सुरु, कस्तो आयो प्रारम्भिक नतिजा ? — Sanchar Kendra
नेपाल पत्रकार महासंघको मतगणना सुरु, कस्तो आयो प्रारम्भिक नतिजा ?
काठमाडाैं । नेपाली सञ्चारकर्मीका लागि बहुप्रतिक्षीत नेपाल पत्रकार महासङ्घका सबै शाखा, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । पत्रकार महासङ्घ प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समितिको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट भएको हो ।
बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ ५ बजे सकिएको हो । मदतान सकिएलगत्तै बिभिन्न जिल्लामा मतगणना सुरु भएको छ । भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार बिभिन्न जिल्लामा जारी मतगणनामा बिपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानलले अग्रता लिएको छ । उपत्यका प्रदेशमा बिपुल पोखरेल प्यानलकै श्रीजन झा नेतृत्वको टीमले अग्रता लिएको छ । यसबारेमा हामीले निरन्तर अपडेट दिनेछौं ।